Maxaa Kala Qabsaday Cristiano Ronaldo Iyo Wiilka Luka Modric Markii Ay Kulmeen? Daawo Muuqaalka
Cristiano Ronaldo inta badan la iska dhegotiro, laakiin hadana inta badan lama hadlo wiilka yar ee Ivano Modric sida muuqaalka ka muuqata.
Mahan wax iska caadi ah in ciyaaryahanka sannadka adduunka la iska indhotiro oo la diido salaantiisa. Laakiin waxaa sidaas ku sameeyay wiilka yar ee uu dhalay Luka Modric.
Inta badan afar sanno jirada waxa ay sameyn lahaayeen wax walba oo ay kula kulmaan xiddiga Real Madrid laakiin hadana Ivano Modric ciyaar gacmeed xiisop leh ayaa u socotay.
Waxa ay aheyd xafladii sannadka ee La Liga oo uu Cristiano Ronaldo ku qaatay seddex abaalmarin, markaasoo Ivano Modric iska indhotiray salaanta Cristiano Ronaldo.
Luka Modric ayaase sharaxaad siiyay Cristiano isagoo yiri: “Raali ahow Cristiano, wuu xishood badan yahay.”
Laakiin Ivano Modric waxa uu saaxiibo ka yahay Ronaldo-ha yar ee Ronaldo Jr.
Luis Enrique Oo Waaniyay Messi: Ka Fogoow Cirbadaha Xanuunka Baabi’iya
Tababaraha Barcelona Luis Enrique ayaa aaminsan in ciyaartoyda ay ka fogaadaan inay isticmaalaan cirbadaha xanuunka baabi’iya ka dib markii la sheegay in Lionel Messi uu u baahday cirbadahaas ka hor kulankii El Clasico ee sabtidii.
Warar ka soo baxayay Spain ayaa sheegayay in xiddiga Argentina uu dhibaato ka qabay canqowga islamarkaana uu dalbaday in cirbad xanuun baabi’in ah lagu duro ka hor kulankii kooxdiisa ay guuldarro 3-1 ka soo gaartay Real Madrid.
Halka uu tababarihiisa qirtay in Messi ay jug yar soo gaartay ka hor ciyaartaas hadana waxa uu diiday inuu si furan uga hadlay xaalada caafimaad ee ciyaartoydiisa inkastoo uu digniin ka bixiyay isticmaalka cirbadaha xanuunka baabi’iya.
“Arintaas waxaa ku shaqo leh dhakhaatiirta” ayuu yiri markii wax laga weydiiyay xaalada uu Messi ku jiray ciyaarta ka hor.
“Haddii uu cirbadu baahan yahay iyaga ayaa go’aankaas gaaraya. Ma aqaano, laakiin boqolkiiba boqol taam ayuu u ahaa kulanka.
“Taladeyda waa in laga fogaado cirbadaha. Cirbadaha qaar waad ku fiicnaaneysaa laakiin waad ogtihiin waanadeyda. Waxaa soo gaartay jug yar, laakiin waa uu fiican yahay.
“Xaalada caafimaad waa mid sir u ah ciyaartoyda ay soo wajahdo.”
Chelsea Oo Iska Xaadirisay Wareega Sideed Dhamaadka Ee Capital One Kadib Guul Ay Ka Gaadhay Shrewsbury
Kooxda Chelsea oo marti u ahayd kooxda heerka labaad ee Shrewsbury ayaa 2:1 kaga soo badisay waxayna Chelsea guusha ku soo gaadhay gool uu Drogba u dhaliyay iyo goolka kale oo uu iska dhaliyay Jermaine Grandison oo ka tirsan kooxda Shrewsbury.
Tababaraha Chelsea ee Jose Mourinho ayaa line upkii uu kala hortayay kooxda Man United todoba isbadal ku sameeyay kulanka uu martida u ahaa kooxda heerka labaad ka tirsan ee Shrewsbury.
Drogba oo kulankii United goolka kaliya kooxdiisa u dhaliyay ayaa markale ku bilawday line upka Mourinho, waxaana weerarka kula bilawday Andre Schurrle. Petr Cech ayaa goolka ku bilawday waxaana la nasiyay Thibaut Courtois.
Gary Cahill, Oscar iyo John Obi Mikel ayaa line upka ku bilawday iyagoo kula bilawday Kurt Zouma iyo Nathan Ake, halka John Terry, Willian iyo Eden Hazard ay badalka ku jiraan.Qaybtii hore ee kulankan ayayna labada kooxood wax gool ah iska dhalin wuxuuna ku soo dhamaaday barbaro bilaa goolal ah.
Markii layskugu soo laabtay qaybtii danbe ee ciyaarta ayay Chelsea ciyaarta ku soo laabatay iyadoo dardar horleh ku socota waxaana dadiiqadii 48 aad ee bilawgii qaybtii danbe ee ciyaarta u suurto gashay inay dhashato goolka kowaad waxaana goolkaas kooxdiisa Chelsea u dhaliyay ruug caddaageeda Drogba. waxayna ciyaartu noqotay 1:0 ay Chelsea hogaanka kula wareegtay.
Schurrle ayaa kubbad fiican la ciyaaray Mohamed Salah kaas oo isaguna goolka u salaxay Drogba.Didier Drogba ayaa waqtigii hore ee uu Chelsea joogay koobka Capital One Cupka ka dhaliyay sideed gool, isagoo 12 kulan u ciyaaray kooxdiisa Chelsea wuxuuna goolkani ahaa kiisii 9 aad ee Capital One Cupka.
Kooxda Shrewsbury ayaa dadal badan u gashay sidii ay iskaga soo celin lahayd goolka ay Chelsea uga hormartay waxayna fursadeedu timid daqiiqadii 77 aad ee ciyaarta , waxaana goolka barbaraha u keenay Andrew Mangan oo laba daqiiqo ka hor ciyaarta soo galay. wuxuuna natiijada ciyaarta u badalay barbaro 1:1 ah.
Chelsea ayaa si deg deg ah uga jawaabtay goolka aya dhalisay kooxda Shrewsbury waxayna goolka labaad heshay kadib markii uu Willian oo ciyaarta badal ku soo galay uu Jermaine Grandison ku sababay inuu goolka iska dhaliyo, ciyaarta ayaana noqotay 2:1 ay Chelsea hogaanka ku soo ceshatay.
Ugu danabayn ciyaarta ayaa ku soo dhamaatay 2:1 ay Chelsea dhinac iskaga dhigtay Shrewsbury. Chelsea ayaana u soo baxday wareega shanaad ee Capital One Cupka ee ay iskuga dheen sideeda kooxood.
Waqtiga CR7 La Gudoonsiin Doono Kabta Dahabka Yurub Oo La Shaaciyay
XIddiga kooxda Real Madrid iyo xulka Portugal Cristiano Ronaldo ayaa la gudoonsiin doonaa kabta dahabka ee European Golden Shoe bisha soo socoda bilowgeeda, iyadoo xiddigii ay abaalmarintaan isla qaadeen ee Luis Suarez uu hore u gudoomay.
Cristiano Ronaldo iyo Luis Suarez ayaa ahaa gooldhaliyayaashii hantay abaalmarinta kabta dahabka iyagoo Real Madrid iyo Liverpool u kala dhaliyay xilli ciyaareedkii hore min 31 gool taasoo keentay inay isla hantaan Kabta Dahabka.
Suarez ayaa abaalmarintiisa kabta dahabka waxa uu ka gudoomay Kenney Daglsih 15kii bishaan October iyadoo markaas loo raadinayay waqti isna la gudoonsiiyo Cristiano Ronaldo kabtiisa dahabka.
Waxaana haatan la shaaciyay in Cristiano Ronaldo uu heli doono kabtiisa dahabka ee seddexaad 6da bisha November.
Waxa uu haatan durbaba ku jiraa kaalinta labaad ee dhanka dhibcaha tartanka abaalmarinta Kabta Dahabka Yurub iyadoo uu ka sareeyo kaliya Kabaev kaasoo dhaliyay 33 gool ilaa iyo haatan kooxda reer Estonia ee Sillamae Kalev, laakiin xajmiga dhibcaha ee goolasha laga dhaliyo horyaalada hoose ee Yurub ayaa ah kuwa aad u yar.
Muxuu Tababare Jose Mourinho Ka Yiri Go’aanadii Garsoore Phil Dowd?
Inuusan tababaraha Chelsea Jose Mourinho ku faraxsaneyn garsoore Phil Dowd waa ay iska cadeyd inkastoo uu diiday inuu wax ka yiraahdo garsooraha ka dib markii Blues ay barbaro 1-1 kala kulantay Manchester United kulan xiiso lahaa oo ka dhacay Old Trafford.
Blues ayaa qeybtii hore ku andacootay inay lahaayeen rigoore markii Chris Smalling uu dhulka dhigay Ivanovic isla waqtigaasna uu Marco Rojo dhulka la galay Terry xilli karoos la soo dhigayay xerada goolka United, laakiin waxba looma dhigin.
Waxaa sidoo kale Chelsea casaan laga siiyay Ivanovic kaasoo qalad ku galay Angel di Maria, taasoo keentay laadkii xorta ahaa ee uu Van Persie ku barbareeyay ciyaarta.
“Waxaan ka imid shan wareysi oo gaagaaban oo kala duwan” ayuu yiri tababaraha reer Portugal markii uu qabanayay shirkiisa jaraa’id ee ka danbeeyay ciyaarta.
“Waxaan sameeyay shan wareysi, dhamaan shantooda wareysi su’aasha ugu horeysa waxa ay aheyd inaan wax ka iraahdo garsooraha.
“Waxaan u sheegay inaan waxba ka dhaheynin, sababtoo ah marka shan ay ku weydiiso wax isku mid ah, uma baahni inaan jawaab bixiyo.
“Waxaan ka doorbidayaa inaan iraahdo feker ahaanteyda, halkii aan joogay iyo sida aan u akhriyay ciyaarta, dareenkeyga waxa uu yahay inaan si fiican u ciyaarnay qeybtii hore, islamarkaana qeybtii labaad aan fantastik aheyn.
“Inaan halkaan imaano oo aan u ciyaarno sida aan u ciyaarnay islamarkaana aanan ku faraxsaneyn dhibic aan helnay waxa ay ku tusineysaa sida aan u fiicneyn iyo sida fiican aan u ciyaareno waqti xaadirkaan.”
Markii lagu riixay inuu ka hadlo dareenkiisa qaabka garsoor ee Phil Dowd, Mourinho ayaa yiri: “Waad ogtihiin ma hadli karo.
“Tababarayaasha qaar waa ay hadli karaan, qaarna ma hadli karaan. Aniga waxaan ku jiraa kuwa aan hadli karin, sababtoo ah waad ogtihiin waxa igu dhacaya marka aan hadlo.
“Sidaasi darteed kama hadlayo. Waxaan ka hadlayaa kaliya ciyaarta oo aan qabo inay fiicneyd.”
Kabtankii South Afrika Meyiwa Oo Toogasho Lagu Dilay
Kabtankii xulka South Afrika Senzo Meyiwa ayaa toogasho lagu dilay markii uu isku dayayay inuu tuugo ka celiyo saaxiibtiisa oo gurigeeda ay soo galeen qolo burcad ah meel u dhow Johannesburg.
27 jirkaan goolhayaha u ahaa Orlando Pirates ayaa geeriyooday axadii ka dib markii xabad nool xabadka looga dhuftay isagoo joogay guriga saaxiibtiis Kelly Khumalo oo ah aktar maxali ah.
“Labo nin ayaa soo gashay guriga, waxaana ay dalbadeen in la siiyo mobile-da, lacag iyo wax walba oo qiimo leh” ayuu yir sarkaal dhanka amaanka ah oo la yiraahdo Sizakele Nkosi-Malubane kaasoo joogay goobta dilku ka dhacay.
“Senzo waxa uu isku dayay inuu Kelly ka ilaaliyo dhibaato madaama mid ka mid ah taga tuugada ah uu qorigiisa ku abaaray iyada.”
Labo nin ayaa guriga gudaha u gashay sida boliiska sheegay halka mid seddexaad uu ku sugayay banaanka guriga, seddexdooda waa ay baxsadeen ka dib dilka.
Meyiwa ayaana nafta ay dhaaftay markii la keenayay cusbitalka sida uu sheegay boliiska.
Hordhaca El Clasico: Maxaa Kala Heysta Caawa Real Madrid v Barcelona?
Kulanka: Real Madrid v Barcelona
Waqtiga: 7pm Saacada Geeska Afrika.
Kulanka maanta ee El Clasico waa kulankii 229aad ee tartan rasmi ah ee u dhaxeeya labada kooxood tartamada oo dhan, iyadoo Real Madrid ay hogaanka heyso iyagoo badiyay 91 kulan marka loo fiiriyo Barcelona oo badisay 89 kulan halka 48 kulan ay barbaro galeen.
Si kastaba, Barcelona ayaa ku riyaaqday kulamadii ugu danbeysay ee horyaalka iyagoo badiyay sideed ka mid ah 12kii kulan ee ugu danbeysay ee La Liga ee ay kulmeen labadaan kooxood oo ay ku jirto xilli ciyaareedkii hore oo ay minan iyo marti ka badiyeen.
Guushii ugu weyneyd ee kulankaan El Clasico abid laga gaaro waa 11-1 oo ay Real Madrid kulan koob maxali ah kaga badisay Barcelona sannadii 1943dii, laakiin taariikhyahanada inta badan ma soo qaataan kulankaan madaama la sheego in Jeneraalkii ciidamada Franco oo ahaa nin la jiray Madrid uu u hanjabay ciyaartoyda Barcelona ee gobolka Catalunya.
Dhawaanse, Barcelona ayaa 5-0 ku xaaqday Real Madrid kulan ka dhacay Nou Camp bishii November 2010, waxaana ay aheyd kulankii ugu horeysay ee Clasico ee uu macalinkii Madrid Jose Mourinho.
Ilaa sideed waji oo cusub ayaa ka soo muuqan kara kulanka caawa ee El Clasico, Luis Suarez, Bravo, Mathieu, iyo Rakitic ayaa ka mid ah ciyaartoyda Barcelona ee laga yaabo inay markii ugu horeysay ciyaaraan, dhanka Madrid Kroos iyo James Rodriguez ayay iygana u nqooneysaa markii ugu horeysay ee ay qibrad u yeeshaan kulankaan halka Chicharito ay isna hubaal tahay inuu wax uun ka dhadhamin doono kulankaan.
Tababare Luis Enrique ayaana ku laabanaya garoonka kooxdiisa hore waana kulankiiisii ugu horeysay ee El Clasico ee isagoo tababare u ah Barcelona.
Tababaraha Barcelona Luis Enrique ayaa sheegaya in xiddiga reer Uruguay Luis Suarez inuu ciyaari doono kulankiisii ugu horeysay ee kooxda kulanka caawa fiidkii ee El Clasico ee ay ka horimaanayaan kooxda Real Madrid.
Weeraryahankii hore ee Liverpool ayaa diyaar ah ka dib markii uu soo dhameystay afar bilood oo uu ka ganaaxnaa ciyaaraha tartamada rasmiga ah madaama uu bishii June qaniinay Giorgio Chiellini.
“Waa hubaal daqiiqado waa uu ka ciyaari doonaa kulankaan, laakiin ilaa iyo inta daqiiqo ee uu ciyaarayo ayaa ah su’aal weyn.” ayuu yiri Enrique.
Ancelotti ayaa isna waxaa ka maqnaan doonaa Gareth Bale kaasoo dhaawac uu ka soo gaaray muruqa bowdada.
Xiddiga reer Wales oo 25 sanno jir ah ayaa seegay kulankii ay kooxdiisa ka badisay Liverpool ee Champions League.
Ancelotti ayaa sheegay in Bale uu muruqa dhaawac ka soo gaaray isagoo kubad darbeynaya waqtigii tababarka ee isbuucii hore.
Real Madrid (4-4-2): Casillas; Carvajal, Pepe, Ramos, Marcelo; Rodriguez, Modric, Kroos, Isco; Benzema, Ronaldo
Barcelona (4-3-3): Bravo; Alves, Mascherano, Mathieu, Alba; Rakitic, Busquets, Iniesta; Suarez, Messi, Neymar.
Lionel Messi ayaa caawa jabin kara ama barbareyn kara rikoorka abid ee gooldhalinta La Liga isagoo haatan leh 250 gool, waxaana uu hal gool ka hooseeyaa ninka rikoorkaas in muddo ah soo hayay Telmo Zarra oo leh 251 gool.
Cristinao Ronaldo ayaa isna raadinaya inuu jabiyo rikoorka seddexleydii ugu badneyd ee laga dhaliyo La Liga, waxa ay haatan rikoorkaas isla hayaan Alfredo di Stefano iyo Telmo Zarra iyagoo wada dhaliyay 22 seddexleey.
Goolhayaha Barcelona ayaan shabaqa laga soo taabanin 720 daqiiqadood oo uu ciyaaray horyaalka La Liga, waxaana uu doonayaa inuu jabiyo rikoorka daqiiqadaha ugu badan ee shabaqa la ilaashado horyaalka La Liga.
Ivan Rakitic: Waxaan Doonayaa Inaan Real Madrid Markale Soo Garaaco
Xidiga khadka dhexe ee xulka qaranka Croatia iyo kooxda Barcelona ee Ivan Rakitic ayaa ku rajo wayn inuu guushii labaad oo isku xigta ka soo gaadho Real Madrid marka ay Barcelona u safarto Santiago Bernabeu.
Ivan Rakitic guul ka gaadhay Real Madrid kulankii ay Sevilla 2:1 kaga badisay Real Madrid,wuxuuna kooxdiisii hore ee Sevilla ka caawiyay inay guul mihiim ah ka gaadho Carlo Ancelotti iyo kooxdiisa Madrid,Rakitic ayaana ku hamiyayaa inuu markale Real Madrid ka soo qaato saddexda dhibcood. Kulanka Sevilla 2:1 kaga badisay Real Madrid ayaa ka tirsanaa xili ciyaareedkii 2013/14.
Ivan Rakitic ayaa yidhi: “Waan ogahay in kulanka u dhexeeya Real Madird iyo Barcelona uu ka kulayl badan yahay kulamada kale isla markaana uu ka duwan yahay”.
“Nasiib ayaan u yeeshay inaan Real Madrid garaaxo markii aan u ciyaarayay Sevilla, taasina waa sida aan doonayo inaan Barcelona la sameeyo”.
“Muhiim ma aha in kala saraynta horyaalka laga hadlo bilaha November ama December, majiraan kulamo sahlani, waxaa nagu waajib ah inaanu kulan kasta guusha u dagaalano”.
“Luis Suarez waa ciyaartoy waxbadan nagu soo kordhin doona, wanaag ayaan ka rajaynaynaa inaanu aragno isagoo ciyaaraya. Maalin kasta waxaanu ku aragnaa tababarka wuxuuna nagu soo kordhin doonaa wax badan”.
Barcelon ayaa Ivan Rakitic la soo wareegay xagaagii dhawaa waxayna doonayaa inuu buuxiyo booska Xavi Hernandez oo ay da’diisu sii waynaanayso. Rakitic ayaa qaab ciyaareed fiican kula bilawday kooxdiisa Barcelona waxaana la rajaynayaa inuu ku bilaaban doono kulanka sabtida ee Real Madrid vs Barcelona.
Ancelotti Iyo Luis Enrique Oo Isku Afka Ka Noqday Inaysan Qorshahooda Badali Doonin Bale Iyo Suarez
Iyadoo ay durba indha caalamku ku soo jeedsadeen kulanka El-Clasico ee bari oo sabti ah dhex mari doona kooxdaha Real Madrid iyo Barcelona ayay labada tababare ee Ancelotti iyo Enrique si isku mid ah uga hadleen maqnaansha Gareth Bale iyo waliba inuu Luis Suarez kulankan ku bilaaban doono Barcelona.
Ancelotti ayaa ku adkaystay inaysan kooxdiisu qorshaheeda u badali doonin inuu Luis Suarez kulankan ciyaari doono halka Luis Enrique uu cadeeyay inuusan waxba khidadiisa ciyaareed ka badali doonin maqnaansha dhaawac ee Bale.
Luis Enrique ayaa yidhi: “Anagu fikradayada ciyaareed u badali mayno anagoo ku salaynayna ciyaartoyda ay kooxda naga soo horjeedaa haysato. Waxaa jira duruufo gaar ah oo aanu anagu qiimaynayno laakiin maqnaansha Bale waxba u badali mayno”
Carlo Ancelotti ayaa isaguna hadal kan oo kale ka sheegay shirkiisa jaraa’id ee ka horeeya kulanka bari wuxuuna yidhi: “Suarez dhibaatadayda ma aha, anigu waan ixtiraamaa tayada ciyaartoyda, laakiin inuu kulankan ciyaaraa qorshahayga ma badalayso. Waa ciyaartoy fiican, waana wax fiican inuu La Ligaha ka ciyaaraayo”.
Gareth Bale ayaa seegay labadii kulan ee ugu danbeeyay ee ay Real Madrid la ciyaartay Levante iyo Liverpool, wuxuuna seegayaa kulanka xiisaha iyo xamaasada badan ee dhex mari doona Real Madrid iyo Barcelona. dhinaca kale waxaa arintaas ka duwan Luis Suarez oo afar bilood ganaax ku maqnaa inuu kulankan ku bilaaban doono kooxdiisa Barcelona sida uu cadeeyay Luis Enrique.
Di Maria, Neymar Iyo Bacca Oo Abaalmarin Ku Tartamaya
Xiddiga Colombia Carlos Bacca, xiddiga Argentina Angel di Maria iyo xiddiga reer Brazil Neymar ayaa u sharaxan ciyaaryahankii Latin America ee ugu fiicnaa La Liga xilli ciyaareedkii hore ee 2013-14.
Bacca ayaa qaab ciyaareed weyn u soo bandhigay Sevilla isagoo u dhaliyay 14 gool horyaalka La Liga halka uu todoba gool ka dhaliyay Europa League, taasoo keentay inay ku guuleystayaan ka dib markii ay finalkii ku garaaceen Benfica.
Di Maria ayaa sidoo kale door muhim ah ka ciyaaray xilli ciyaareedkii Real Madrid isagoo ka caawiyay inay hantaan Copa del Rey iyo Champions League. Xilli ciyaareedkaan waxa uu u ciyaarayaa kooxda Manchester United.
Neymar ayaa dhameystay xilli ciyaareedkiisii ugu horeysay ee ciyaaryahan Barcelona ahaan, isagoo dhaliyay sideed gool horyaalka xilli ciyaareedkii hore. Waxa uu durbaba dhaliyay sideed gool xilli ciyaareedkan.
Xiddiga ku guuleysta abaalmarintaan waxaa lagu dhawaaqi doonaa 27ka bishaan October.